Hiriira Mormiif Deebiin Mootummaa Reebicha, Rasaasaa fi Hidhaa Tahe, Jedhu Jiraattonni - Oromia Shall be Free
Hiriira Mormiif Deebiin Mootummaa Reebicha, Rasaasaa fi Hidhaa Tahe, Jedhu Jiraattonni
bilisummaa January 2, 2016	Leave a comment
WASHINGTON, DC — VAOHiriira mormii baatii Sadaasa keessa Oromiyaa keessatti jalqabee haga ammaatti itti fufee jiru irratti tarkaanfiin humnoota mootummaan fudhatamaa jiru, gaddaa fi yaaddoo guddaa uumuu isaa dubbatu – jiraattonni magaalaalee adda addaa.
Magaalaa addaa Oromiyaa, Buraayyuu keessa kanneen jiran, mana-barnootaa sadarkaa lammaffaa fi mana-barnootaa qophaa’inaatti barattoonni baratan kaleessa hiriira mormii ba’uu isaanii fi humnoonni mootummaa itti bobba’ee reebichaan addaan facaasuu isaanii, jiraattonni magaalatti Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jira.
Wallaggaa Bahaatti kan argamtu, aanaa Giddaa Ayyaanaa, magaalaa Ayyaanaa keessattis akkasuma barattoonni Mana-barnootaa sadarkaa lammaa fi Mana-barnootaa Qophaa’inaa, akkasumas, ka sadarkaffaa tokkoffaa kaleessa hiriira mormii ba’uu isaanii irraa kan ka’e, humnootiin mootummaa barattootaa fi warreen isaanii ijoollee barbaacha deeman reebuu fi hidhuu isaanii dubbatu – barattoonnii fi jiraattonni.
Wallaggaa Lixaa, magaalaa Gimbiitti dhihootti kan argamtu – magaalaa xiqqoo – Gambeelaa jedhamtu keessatti garuu, otuu hiriirri mormii tokko illee hin geggeessamiin, humnoonni mootumma manneen jiraattootaatti cabsanii seenuudhaan reebicha geggeessu – jechuudhaan, jiraattonni magaalattii iyyataa jiran. Dargaggoon koolejii xumuratee mana warra isaa jiru, miillaa fi harka isaa irra rasaasaan dhawamee kan Hospitaala Gimbiitti wal’aanamaa jiru ta’uu illee dubbatu.
Guutuu waayee kanaa
Previous ‪#‎OromoProtests‬ Prayer and Solidarity at Bilal Mosque in Minnesota
Next Dhaamsa Boontuu Baqqalaa Garbaa Uummata Oromoof